Manangana firenena ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
La MCB et l’AFD signent le démarrage des lignes de crédit SUNREF à Madagascar il y a 8 heures
Le projet de 8,2 km visant la fluidification du trafic urbain est quasi terminé il y a 6 jours
Les célébrations du cinquième anniversaire de Startimes se poursuivent il y a 7 jours
Les enfants souffrent aussi des conséquences de la pandémie il y a 7 jours
«Ary nahita izy ka nino fa nitsangan-ko velona tokoa ny Tompo.» il y a 11 jours
Raha mbola misy koa ny fanantenana ! il y a 11 jours
Manangana firenena !
P.Prospère il y a 5 mois
Mitohy hatrany ny fiarahantsika eto amin’ny www.lakroa.mg sy ny ekipan’i Lakroan’i Madagasikara. Indro ny matoan-dahatsorata norenesinao tao amin’ny Feon’i Lakroa tao amin’ny RDB ny talata 17 novambra teo. Samia ho tahin’Andriamanita isika rehetra.
Misy fifanoheran-javatra samihafa be dia be mitranga eto amin’ny tanintsika. Ireny fifanoherana samihafa ireny no miteraka korontana maro. Vokany, manjary sakana ho an’ny fampandrosoana satria mazàna tsy mifanindran-dalana amin’ny lalam-pampandrosoana tokony harahin’ny besinimaro. Ny firenena araka izany no mahita faisana satria ny olom-pirenena mandrafitra azy no tsy mety milamina.
Mifandray amin’ny lafiny politika ny maro amin’izy ireny ary hatramin’izay naha firenena ny firenena dia ny politika hitantanana ny firenena no sarotra alamina eto amintsika. Tsy resaka mpitondra sy mpanohitra, tsy resaka antoko politika na fifidianana fotsiny ihany, fa ilay fototra hananganana ny firenena mihitsy no marefo. Izany hoe, ny lalàna hiarovana ny fiainan’ny olona sy ny fananany ary ny zony manoloana ny fanjakana tompon’andraikitra amin’izany.
Raha ny politika eny an-kianja no henoina dia io ilay lazainy hoe « manao didy jadona ny fanjakana », « tsy misy ny demokrasia », « manjary herim-pamoretana ny mpitandro filaminana » satria ilay « fahalalahana » arovan’ny lalàna na ilay zo fototra maha olona voalazan’ny Lalàm-panorenena ao amin’ny andininy faha 6, araka ny foto-kevitra ankapobeny no voatohintohina. Ifandroritana ny resaka fanarahan-dalàna na tsia ho an’ny andaniny sy ankilany.
Raha raisina amin’ny sokajiny samihafa amin’ny fiainam-bahoaka nankinina amin’ny fahefam-panjakana indray izany dia ireo mahakasika ny fitandrovana ny fandriam-pahalemana, ny fiarovana ny rariny sy ny hitsiny, ny fitantanana ny tanàna sy ny fanajariana ny tanàn-dehibe, izay niteraka olana teny Ambohitrimanjaka ; ny fiarovana ny fananana, toy ny resaka fananan-tany izay ahitana olana maro eto Madagasikara, ny sekoly sy ny fanabeazana – maimaim-poana sy andoavam-bola- manara-penitra sy tsy manara-penitra. Ny antom-pisian’ny asam-panjakana sy mpiasam-bahoaka mbola anjakan’ny tsolotra sy kolikoly samihafa.
Toy izany ny sehatry ny tontolo iainana : ny loto sy ny fako miavosa, ny olana ara-jiro sy rano mampikaikaika tanàna maro…Ny lalàna manoloana ny zo fototra sy andraikitry ny olom-pirenena : fahalalahana amin’ny fanehoan-kevitra, hahazo vaovao marina ; tsy ahiahiana amin’ny fanehoan-keviny (fizarana faha II, and. 11, amin’ny Lalàm-panorenana)… sns.
Ny fifanoheran’ny lalàna hita taratra amin’ny fampiharana azy no miteraka faharavan’ny fifampitokisana eny amin’ny fiarahamonina. Mitondra fifanenjehana sy olana samihafa mamparefo ny firaisan-kina sy fihavanana nampiavaka ny fiarahamonina malagasy. Tsy mahasolo soatoavina iorenan’ny fiaraha-miaina anefa ny lalàna raha toa tsy hajaina sy tsy omena hasina. Manana olana etika araka izany ny lafiny lalàna eto amintsika, izany hoe, tsy manana idealy hananganana ny rariny sy ny soatoavina moraly ny mpitondra, hany ka mandringa ny rafitra samihafa sy ny fahaiza-manao norantovina tany an-tsekoly, nangalana mari-pahaizana ambony.
Raha tsorina ny filaza dia tsy manana fototra hijoroany ny demokrasia rehefa voahosihosy ny lalàna. Fiekena ampahibemaso ny tsy fananan-kasin’ny rafitra politika hananganana firenena izany. Tsy tanjon’ny politika araka izany ny fampitovian-jo ny olom-pirenena. Ny tsy fitoviana eo anatrehan’ny lalàna no endriky ny tsy fanajana ny zon’ny olombelona. Mbola ho sarotra araka izany ny hampijoro ny fiandrianam-pirenena. Sarotra ny hanarina ny politika rehefa ny fanjakana no mivily lalana amin’ny antom-pijoroany. Dia eo isika ankehitriny. Te ho tan-dalàna nefa tsy masi-mandidy ; te ho masi-mandidy nefa tsy mitandro ny hasina. « Ny vahoaka ipoiran’ny fahefana anefa no maha masi-mandidy, ary ny Malagasy no firenena sy vahoaka mivondrona ho fanjakana masi-mandidy ». (Andininy voalohany amin’ny lalàm-panorenena, foto-kevitra ankapobeny). Ny vahoaka no Andriamanjaka eo amin’ny firenena.
Energies renouvelables : La MCB et l’AFD signent le démarrage des lignes de crédit SUNREF à Madagascar - il y a 8 heures
Lu pour vous : Covid à Madagascar : la guerre de l’oxygène - il y a 1 jour
Matoan-dahatsoratra : Raha mbola misy koa ny fanantenana ! - il y a 11 jours
Matoan-dahatsoratra : Vonjeo ny repoblika - il y a 24 jours